Joere – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Category Archives: Joere
1 Shoko raJehovha rakasvika kuna Joere mwanakomana waPetueri. Dambudziko reMhashu 2 Inzwai izvi, imi vakuru; teererai imi mose vagere munyika. Ko, zvakadai zvakatomboitika here pamazuva enyu, kana pamazuva amadzitateguru enyu? 3 Zvinhu izvi zviudzei vana venyu, uye vana venyu ngavaudzewo vana vavo, uye vana vavowo vaudze rudzi runotevera. 4 Zvakasiyiwa nefararira remhashu zvakadyiwa nemhashu dzemagutaguta; […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoereLeave a comment on Joere 1
Hondo yeMhashu 1 Ridzai hwamanda muZioni; ridzai hwamanda yokuyambira vanhu muri pagomo rangu dzvene. Vanhu vose vagere munyika ngavadedere nokuti zuva raJehovha riri kuuya. Rava pedyo, 2 zuva rerima nokusuwa, zuva ramakore nokusviba. Samambakwedza anoonekwa pamusoro pamakomo, hondo huru ine simba guru iri kuuya; zvakadai hazvina kutombovapo munguva yakare, uye hazvichazoonekwizve munguva ichatevera. 3 Moto […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoereLeave a comment on Joere 2
Kutongwa kweNdudzi 1 “Mumazuva iwayo, napanguva iyoyo, kana ndichinge ndadzosa pfuma yeJudha neyeJerusarema, 2 ndichaunganidza ndudzi dzose ndigoenda nadzo kuMupata waJehoshafati. Ipapo ndichavatonga nokuda kwenhaka yangu, vanhu vangu vaIsraeri, nokuti vakaparadzira vanhu vangu pakati pendudzi, uye vakagovana nyika yangu. 3 Vakakanda mijenya pamusoro pavanhu vangu, vakatsinhanisa vakomana nezvipfeve; vakatengesa vanasikana kuti vagotenga waini yokuti vanwe. […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inJoereLeave a comment on Joere 3